सूर्य थापाले लेखे- दीपशिखाले अनुशासन सिकाउने ? फेसबुकमा चर्चाचर्की « Khabar24Nepal
सूर्य थापाले लेखे- दीपशिखाले अनुशासन सिकाउने ? फेसबुकमा चर्चाचर्की
साउन २७,काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुई नेताहरु फेसबुकमा एकअर्काविरुद्ध खरो रुपमा उत्रिएका छन् ।
थापाले लेखेकाे स्टाटसलाई लिएर दिपशिखाले थापालाई पार्टीको जिम्मेवारी छोड्न चुनौती दिएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रति बारम्बार आक्रमण गरेको भन्दै त्यस्तो प्रकारको आक्रमण अब सैह्य नहुने बताएका छन् । उनले फेसबुकमार्फत पार्टी अनुशान नमान्नेले जिम्मेवारी त्याग गर्दा राम्रो हुने तर्क गरेका छन् ।
सुर्खेतमा गुडिरहेको मोटरसाइकलबाट खस्दा एक जनाको मृत्यु